Dhallinyarada Netherlands oo dalbanaya in dambi laga dhigo jirka laga ganacsado - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka EXXPOSE
Ol'olahan la rabo in sharci darro looga dhigo ka ganacsiga jirka ayaa loo bixiyay "waan qiimo badanahay", waxaana kaalin muuqata ku leh dad diinta Kiristan ah.
Dadka ol'olahan wadana waxay rabaan in lagu maago oo ganaax la dul dhigo dadka lacagta ku bixiya galmada.
Hoggaamiyeyaasha Midig-Fog ee dalalka Yurub oo shiraya
Holland: Siyaasi ku hanjabay inuu masaajidda xirayo
Waxayna Instagram-ka soo dhigeen sawirro ay hayaan boorar ay ku qoran tahay "Ik ben onbetaalbaar" oo u dhiganta waan qiimo badanahay, iyaga oo raacinaya "bal ka warran hadday walaashaa ahaan lahayd".
Si kastaba ha ahaatee qof ka jawaabaya sawirkaas ayaa soo qoray "Anigu isxaan ahaan baaban arrintan u sameeyaa. Dad ila mid ahna way jiraan. Marka ol'olahan shaqadayda halis ayuu ka dhigayaa."
Siday u arkeen dadka jirkooda ka ganacsada?
"Haddii gabadh ay rabto in ay jirkeeda iibiso waa istikhiyaarkeed," arrintaasina waa dood ay dabada ka riixeen siyaasiyiin iyo dad ay isku aragti yihiin.